Manchester United Oo Diyaar U Ah Inay Xaqiijiso Booska Mauricio Pochettino Ee Kooxda
HomeWararka CiyaarahaManchester United oo diyaar u ah inay Xaqiijiso booska Mauricio Pochettino ee Kooxda
November 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Warka Xiisaha Leh 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay xaqiijiyaan ilaa xagaaga soo aadan si ay Mauricio Pochettino u magacawdo macalinkooda cusub.
Red Devils ayaa raadineysa tababare cusub ka dib markii la ceyriyay Ole Gunnar Solskjaer Axadii, iyadoo Pochettino la rumeysan yahay inuu yahay bartilmaameedkooda koowaad .
United damacsan in uu magacaabo tababare ku meel gaar ah ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan, iyadoo Laurent Blanc , Steve Bruce ay ku jiraan liiska Old Trafford.
Si kastaba ha ahaatee, Red Devils ayaa sidoo kale raadineysa tabare rasmi ah iyadoo Zinedine Zidane , Brendan Rodgers iyo Erik ten Hag la rumeysan yahay inay ku loolamayaan booskaas.
Sida laga soo xigtay Evening Standard , United ayaa diyaar u ah inay Xaqiijiyaan ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan si ay u hubiyaan inay helaan ninka saxda ah ee bedeli kara Solskjaer, inkastoo xaaladdu ay isbedeli karto haddii Pochettino uu ka tago PSG.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Macalinka reer Argentina uusan haatan ku faraxsaneyn doorkiisa PSG, waxaana uu hamiga ku hayaa inuu mar kale maamulo Premier League .
Pochettino, oo qandaraaskiisa Parc des Princes ay uga harsan tahay wax ka badan 18 bilood, ayaa ku guuleystay Coupe de France iyo Trophee des Champions horaantii xilli ciyaareedkan, waxaana kooxdiisa Paris ay 11 dhibcood oo nadiif ah ku haysaa hogaanka Ligue 1.